03 Sep, 2020 - 11:09	 2020-09-03T11:06:02+00:00 2020-09-03T11:06:02+00:00 0 Views
MAKADII vapepeti venhau, riri sei basa? Ndiri murume ane makore 29 okuberekwa. Ndinotsvaga mukadzi ari HIV positive ane makore 27 zvichidzika. Ngaave ari pamushonga, anoenda kumasowe. Zvizhinji totaura nemasms panhamba idzi 0774 263 682.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 38, ndiri positive uye ndodawo murume ari positive. Anoda ngaandibate pa0771 325 024.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 ekuberekwa. Ndotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 32, anorevesa uye anonamata. Anoda ngafone apa 0775 257 587.
Kwayedza makadii? Ndinotsvagawo shamwarikadzi ine makore 32 – 34 inogara Mutoko area. Ini ndinogara muMakaha. Andida ngaandibate pa0716 656 659 tozotaura tose.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 20, ndinoda musikana ane makore 18 kana 19. Anondida ngaandibate pa0733 737 168.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 33 nevana 2. Ndinoshanda uye ndodawo murume anoshanda ane makore 34 kusvika 50. Ari pachokwadi ndibate pa0718 969 003.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 24 zvichidzika asina chirwere nokuti ini handina chirwere. Ndoda ari pachokwadi. Anondida ngandibate pa0784 374 619 kana masms ndopindura. Ndogara maMutare.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 33 uye ndinotsvaga musikana wekushamwaridzana naye ane makore 22 kusvika 29. Andifarira ngandifonere pa0775 818 156.
Ndiri murume ane makore 34, ndinotsvagawo mukadzi ane mwana mumwe chete. Ndibatei pa0774 624 617.
Ndine makore 37 nevana 4, ndiri HIV negative uye ndotsvagawo musikana wekuroora ane makore 23 – 27. Ngaave ane hunhu, nzenza kwete. Nhamba dzangu 0777 139 589.
Ndiri murume ane makore 38, ndinotsvakawo mukadzi kana musikana ane makore 25 kusvika 38 anoda zvemba kwete vatambi. Ndobatika pa0714 687 025.
Makadini? Ndiri mukomana anoda musikana ane makore 22 – 30. Andifarira ndibate pa0718 643 848.
Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvaga musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 21. Anoda ngaandibate pa0771 272 078.
Ndiri murume ane makore 27 ndotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi ane makore 18 kana 19. Nhare yangu 0778 196 619.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40 ndotsvagawo mudzimai anoshanda muHurumende asina chirwere seni. Ndine vana 2, nhamba dzangu 0774 494 256.
Ndanyorera ndanyorerazve ndishambadzewo veduwe. Ndiri murume ane makore 46, mugari wemuHarare uye ndoda mudzimai ave kuda zvewanano. Anoda ndibate pa0779 921 627.
Makadii henyu veKwayedza? Ndakambonyorerawo asi handisati ndamuwana wandiri kuda. Ndiri murume ane vana 2, ndiri muHarare uye ndinotsvagawo mudzimai wekufambidzana naye. Ngaave ari pamushonga asi aine muviri wakasimba chaizvo. Andifarira ngaandibate pa0774 894 069.
Ndiri murume ane makore 34 nevana 2. Ndinotsvagawo mudzimai anoda zvemba. Anoda anondibata pa0773 645 908.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo mukadzi ane mwana 1 kana asina ane makore 24 kusvika 27. Ndine makore 36, nhamba dzangu 0776 640 273.
Ndiri murume ane makore 35, ndinoda mudzimai ane makore 31 zvichidzika. Runhare rwangu 0774 601 467.
Ndiri murume ane makore 35 nemwana 1. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 19 – 25 ane mwana 1 kana asina. Andifarira ngaandibate pa0771 968 975.
Makadii veKwayedza kuTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 30, ndinodawo mukadzi anoda zveimba ane mari, ini handina ndoda kutopiwavo naye. Chimiro ndiri pakati nepakati. Anoda ndibate pa0774 056 962.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 32. Ndinotsvaga murume ane makore 34 – 38 ane mwana 1. Ndinoda asiri pamushonga, anoenda kuchechi. Nhare yangu 0784 535 049.
Makadii? Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvakawo musikana ane makore 18 – 23 anoda zvekuroorwa. Anoda anondibata pa0782 025 864.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 41, ndodawo murume ane makore 40 zvichikwira, asina HIV nekuti ini handina. Ngaave ane rudo asingazondirambidze kushanda. Vane chimwe chinangwa chisiri cherudo musafone henyu. Ndatenda, ndinobatika pa0717 229 285.
Makadii veTishamwaridzane? Ndinotenda nechirongwa chino, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi anoda kuroora uye ari pamushonga. Ngaave nemakore 48 zvichikwira. Andifarira ngaandibate pa0717 458 022.
Tishamwaridzane22 Oct, 2020
Covid-19 yaondonga mabasa ekurima
Vanhu 5 vakafa neCovid pazuva
Mwana wekutsakatika awanikwa
Musanete, rambai makadaro – WHO
Vamwe vave kuvarairwa
Ndiri kutamba yese-yese: Mambare
Tiri kuda mamasiki
Zvidzivirirei, Covid iriko
Maonero Edu: Musape mukana kudenda reCovid
Koshesai tsika dzedu